China Cryogenic yepakati saizi yemvura okisijeni gasi chirimwa Liquid Nitrogen Plant vagadziri uye vanotengesa KANA
PSA Oxygen Kudyara
Kurapa Oxygen Kudyara
PSA Nitrogen Kudyara
Liquid Nitrogen Chirimwa
Cryogenic mhepo yekuparadzanisa Oxygen Sima
Cryogenic mweya wekuparadzanisa Nitrogen Chirimwa
Mhepo yekuparadzanisa michina
Oxygen & Nitrogen Chokwadi ...
Medical Gasi Kwezvokudya Nemiti Plant fo ...
Liquid Nitrogen chirimwa Liqui ...
Liquid Oxygen neNitrogen ...
Cryogenic mhando yakakwira efficie ...
Cryogenic yepakati saizi yemvura okisijeni gasi chirimwa Liquid Nitrogen Dyara
Mhepo Kuparadzanisa Chikamu zvinoreva zvishandiso zvinowana okisijeni, nitrogen uye argon kubva pamvura yemhepo pakadzika tembiricha nemusiyano wechinhu chimwe nechimwe chinofashaira.
1.Simple kuisirwa uye kugadzirisa nekuda kwemodular dhizaini uye kuvaka.
2.Fully zvoga hurongwa kuti nyore uye hwakavimbika oparesheni.
3.Guaranteed kuwanikwa kweiyo yakachena-yakachena maindasitiri magasi.
4.Guaranteed nekuwanikwa kwechigadzirwa mune yemvura chikamu chinofanira kuchengetwa kuti chishandiswe panguva chero yekuchengetedza mashandiro.
5.Kuderera kwesimba kushandiswa.
6.Short nguva yekuendesa.
Okisijeni, nitrogen, argon uye imwe isingawanzo gasi inogadzirwa nemhepo yekuparadzanisa unit anoshandiswa zvakanyanya musimbi, kemikari
indasitiri, Refinery, girazi, rabha, zvemagetsi, hutano, chikafu, simbi, kugadzira simba nemamwe maindasitiri.
Dhizaini dhizaini yemuti uyu inoenderana nenzvimbo dzakasiyana dzekufashaira gasi rega rega mumhepo. Mhepo yakamanikidzwa, yakatonhorera uye kubviswa kweH2O uye CO2, zvobva zvadzikiswa mumuchina mukuru wekupisa kusvikira waiswa. Mushure mekugadzirisa, okisijeni yekugadzira uye nitrogen inogona kuunganidzwa.
Ichi chirimwa chiri cheMS kuchenesa mweya nekuwedzera turbine expander maitiro. Iyo yakajairika mhepo yekuparadzanisa chirimwa, iyo inotora yakakwana zvinhu kuzadza uye kugadzirisa kweargon kugadzira.
Mhepo isina mbishi inoenda kumhepo firita yekubvisa guruva uye kusachena kwemishini uye inopinda mweya turbine compressor uko mweya wakamanikidzwa kusvika 0.59MPaA. Inobva yaenda mumhepo precooling system, uko mhepo inotonhorera kusvika 17 ℃. Mushure meizvozvo, inoyerera kuenda ku2 mamorekuru nesefa kushambadzira tangi, iyo iri kumhanyisa, kuti ibviswe H2O, CO2 uye C2H2.
Mushure mekucheneswa, mweya unovhengana pamwe nekuwedzera mweya unodziya. Ipapo inotsikirirwa nepakati pekumanikidza compressor kuti igovaniswe kuita2 hova. Chikamu chimwe chinoenda kune chikuru kupisa chinodzikamiswa kusvika -260K, uye chakayamwa kubva pakati chepakati peiyo huru kupisa exchanger kupinda yekuwedzera turbine. Yakawedzerwa mweya inodzokera kune huru kupisa exchanger kuti iwedzeredzwe, mushure meizvozvo, inoyerera kune mhepo inowedzera compressor. Iyo imwe chikamu chemweya chinowedzerwa neakanyanya tembiricha expander, mushure mekutonhora, inoyerera ichienda kune yakaderera tembiricha inowedzera kuwedzera. Ipapo inoenda kuchitonhora bhokisi kuti itonhorere kusvika ~ 170K. Chikamu chayo chingadai chakatonhora, uye chichiyerera kusvika pasi pechikamu chezasi kuburikidza nekupisa chinja. Uye imwe mweya inoyamwa kuyedzwa yakaderera. expander. Mushure mekuwedzeredzwa, yakakamurwa kuita zvikamu zviviri. Chimwe chikamu chinoenda pasi pezasi kwekoramu yekugadziriswa, iyo yasara inodzokera kune huru kupisa exchanger, yozoyerera ichienda kumhepo booster mushure mekudzoreredzwa.
Mushure mekugadziriswa kwekutanga mukamuri yepasi, mweya wemvura uye yakachena mvura nitrogen inogona kuunganidzwa mune yakadzika chikamu. Waste liquid nitrogen, mweya wemvura uye yakachena mvura nitrogen inoyerera ichienda kumusoro kwepamusoro kuburikidza nemhepo yemvura uye mvura senitrogen inotonhorera. Iyo inogadziriswa kumusoro kwepamusoro zvakare, mushure meizvozvo, okisijeni yemvura ye99.6% kuchena inogona kuunganidzwa pasi pezasi kwekoramu yepamusoro, uye inonunurwa kunze kwebhokisi rinotonhora sekugadzira.
Chikamu cheArgon chidimbu muchikamu chepamusoro chakayamwa kune isina kuchena argon ikholamu. Iko kune maviri mativi eakafumuka argon ikholamu. Reflux yechikamu chechipiri inoendeswa kumusoro kweyekutanga nepombi yemvura se Reflux. Iyo inogadziriswa mune isina kuchena argon ikholamu kuti utore 98.5% Ar. 2ppm O2 yakashata argon. Ipapo inoendeswa pakati peakachena argon ikholamu kuburikidza ne evaporator. Mushure mekugadziriswa mune yakachena argon ikholamu, (99.999% Ar) yemvura argon inogona kuunganidzwa pasi peiyo yakachena argon ikholamu.
Waste nitrogen kubva kumusoro kwepamusoro koromo inoyerera ichibuda mubhokisi rinotonhorera kunatsa semweya unogadziridza, zororo rinoenda kunotonhora shongwe.
Nitrogen kubva pamusoro pemubatsiri ikholamu yepamusoro yekoramu inoyerera ichibuda mubhokisi rinotonhora sekugadzira kuburikidza inotonhorera uye chikuru kupisa exchanger. Kana pasina basa senitrogen, ipapo inogona kuendeswa kumvura kutonhora shongwe. Kune inotonhorera inokwana yemvura inotonhora shongwe haina kukwana, chiller inoda kuiswa.
1: Air Compressor (pisitoni kana isina mafuta)
2: Mhepo Refriji Yuniti
3.Air yokuzvinatsa hurongwa
4: Tangi remhepo
5: Mvura yakaparadzaniswa
6: Molecular nesefa munatsi C PLC auto）
7: Precision firita
8: Rectification ikholamu
9: Booster turbo-expander
10: Oxygen Yakachena Analyzer
Kuvaka Mukufambira Mberi
Pashure: Anodhura mugadziri we-mvura-okisijeni-nitrogen-argon-yekugadzira-chirimwa
Zvadaro: Cryogenic okisijeni chirimwa mutengo mvura okisijeni chirimwa
Otomatiki Nitrogen Argon Oxygen Kugadzira Muchina Wemuchina
Mugadziri High Chakachena Nitrogen Equipment PS ...
Rondedzero kuburitsa (Nm³ / h) Inoshanda gasi yekushandisa (Nm³ / h) yekuchenesa mweya system Vanoisa kunze caliber ORN-5A 5 0.76 KJ-1 DN25 DN15 ORN-10A 10 1.73 KJ-2 DN25 DN15 ORN-20A 20 3.5 KJ-6 DN40 DN15 ORN-30A 30 5.3 KJ-6 DN40 DN25 ORN-40A 40 7 KJ-10 DN50 DN25 ORN-50A 50 8.6 KJ-10 DN50 DN25 ORN-60A 60 10.4 KJ-12 DN50 DN32 ORN-80A 80 13.7 KJ-20 DN65 DN40 ...
Top yepamusoro PSA okisijeni chirimwa kutengeswa inopisa so ...
Rondedzero Kubuda (Nm³ / h) Inoshanda gasi kushandiswa (Nm³ / h) yekuchenesa mweya system ORO-5 5 1.25 KJ-1.2 ORO-10 10 2.5 KJ-3 ORO-20 20 5.0 KJ-6 ORO-40 40 10 KJ-10 ORO-60 60 15 KJ-15 ORO-80 80 20 KJ-20 ORO-100 100 25 KJ-30 ORO-150 150 38 KJ-40 ORO-200 200 50 KJ-50 1: Mapepa nemaPurp maindasitiri eOxy kuchenesa uye kurongedza 2: Girazi maindasitiri echoto enrichme ...
Maindasitiri PSA nitrogen inogadzira chirimwa che ...
LNG Dyara Nitrogen jenareta Equipment Industri ...
Inobatanidzwa peturu yegesi (APG), kana gasi inosanganisirwa, ingori gasi rechisikirwo iro rinowanikwa riine mari yemafuta epetroleum, ingave yakanyungudutswa mumafuta kana se "gasi chivharo" yemahara pamusoro pemafuta mudura. Iyo gasi inogona kushandiswa munzira dzinoverengeka mushure mekugadziriswa: yakatengeswa uye yakaiswa mune yakasarudzika-gasi yekuparadzira netiweki, inoshandiswa kune-saiti magetsi ekugadzira neinjini kana turbine, ...
Medical Oxygen jenareta Chipatara Oxygen Genera ...
Rondedzero Kubuda (Nm³ / h) Inoshanda gasi kushandiswa (Nm³ / h) yekuchenesa mweya system ORO-5 5 1.25 KJ-1.2 ORO-10 10 2.5 KJ-3 ORO-20 20 5.0 KJ-6 ORO-40 40 10 KJ-10 ORO-60 60 15 KJ-15 ORO-80 80 20 KJ-20 ORO-100 100 25 KJ-30 ORO-150 150 38 KJ-40 ORO-200 200 50 KJ-50 Isu tinogadzira PSA okisijeni chirimwa tichishandisa iyo yazvino PSA ( Pressure Swing Adsorption) tekinoroji. Kuva lea ...
Cryogenic mhando mini chiyero mweya kupatsanura chirimwa ...
Zvigadzirwa Zvakanakira Kambani yedu iri kuita semugadziri uye mutengesi weiyo cryogenic mhepo yekuparadzanisa chirimwa, PSA oxygen / nitrogen chirimwa, yakakwira-vhoriyamu cryogenic mvura tangi & tanker uye kemikari. Iyo zvakare yakagadzirirwa neakasiyana zvigadzirwa uye michina muhuwandu hwemaseti mazana maviri nemakumi matatu, senge hombe-saizi yekusimudza michina, yepasi pemvura p ...
No.88 zhaixi kumabvazuva mugwagwa jiangnan taundi hangzhou guta zhejiang China
Mhomho / WhatsApp / WeChat: +86 18758037220